भारतीय सुरक्षाबलको ताण्डब : नेपालीलाई आफ्नै जमिनमा खेति गर्न रोक (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
कञ्चनपुर । फसल नेपाली किसानको खेतबारीमा फल्छ । उनीहरुले त्यो खेतबारीको कुत, तिरो र राजश्व मालपोत कार्यालयमा बुझाउछन् । तर भारतीय सुरक्षाकर्मी बुट बजार्दै आएर राइफल देखाएर सोध्छ, भारतीय भूमिमा खेति गर्ने अधिकार कहाँबाट पाइस ? यो नियति सीमामा बस्ने धेरै नेपालीहरुले भोग्दै आएको पीडा हो ।
हरेक पटक थिचोमिचो र अन्याय भोग्दै आएका कञ्चनपुरका सीमावर्ती वासिन्दाले फेरि उही नियति भोग्न थालेका छन् । नेपाली भूमिमा लगाएको फसल उठाउन पाउँदैनन्, बरु कुहिएर जान्छ तर भारतीय सुरक्षाकर्मीले फसल लगाएको बालीमा जाँदा राईफलको पर्खाल तेस्र्याएर हरेक पटक अवरोध गर्दै आएको छ ।
राज्यको उपस्थिति सीमामा कमजोर बन्दा र कुनै पनि कुटनैतिक पहल नहुँदा सीमावासी नेपाली नागरिकले सास्ती भोग्ने क्रम जारी छ । भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालीहरु माथि निर्लज्जताका साथ दमन गर्दै आएपनि बोलिदिने निकाय गम्भीर नबन्दा अवस्था झनै अत्यास लाग्दो बन्दै आएको छ ।
त्यसमाथि भारतीय सीमा सुरक्षा बलसंग बढी बोल्ने नेपाली नागरिकको फोटो खिचेर राख्न र पछि उठाएर भारत ल्याएर हिरासतमा राख्नु पर्नेसम्मको धम्की पनि सुरक्षाबलका उच्च अधिकारीहरुले दिने गरेका छन् । त्यो जमिनको राजश्व बुझ्ने नेपाल सरकारले केही नबोलिदिदा सीमामा एसएसबीको ज्यादति झनै बढेको छ ।
गोविन्द ढलेको त्यो कञ्चनपुरमा अझै कति गोविन्द ढल्ने हुन् ?
२०७३ साल फागुन २७ गते कञ्चनपुरमा सीमावर्ती नेपाली नागरिक गोविन्द गौतम भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर कहिल्यै नउठने गरि ढले । राज्यले उस्लाई शहीद घोषणा ग¥यो र उनको परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापत दश लाख रुपैयाँ दियो । बस, शहीद भए गोविन्द ।
तर सरकारको अकर्मन्यताका कारण धेरै गोविन्दहरुले अझै पनि सीमामा सास्ती पाउँदै आएका छन् । नेपालले कुटनीतिक तवरबाट अडानका साथ गौतम प्रकरणको घटनालाई भारतीय पक्षसंग राखेको भए सीमामा नेपाली नागरिकले भोग्दै आएको नियति दोहोरिदैन थियो होला शायद ।
तर त्यति नभइदिदा अहिले गौतम ढलेको त्यही कञ्चनपुरको सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरैले अपमानको पराकाष्ठा भोग्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक भारतीय सुरक्षाकर्मीको अपमानबाट प्रताडित बनेका छन्, नारायणप्रसाद अधिकारी ।
जग्गा नेपालको, कब्जा भारतको, खेती गर्न दिदैनौं : एसएसबी
कञ्चनपुर जिल्लाका बिभिन्न क्षेत्रमा लामो समयदेखि सीमानाको विषयलाई लिएर विवाद चल्दै आएको छ । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर ८ सुन्दरनगरमा बर्षौदेखि खेतिपाति गर्दै आइरहेका नारायणप्रसाद अधिकारीको परिवारलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले दुःख दिदै आएको छ । उनीहरुको दावी छ, अधिकारीले खेतिपाति गरेको जमिन भारतको हो ।
यसरी हरेक बर्ष तिर्छन नेपाली नागरिकले जमिनको राजश्व
२०५४ सालको नापीको फिल्ड बुकमा कायम भई २०६६ सालमा सेतो पुर्जा पाएका अधिकारी परिवारले खेती गर्ने समयमा एसएसवीका जवानले खेतमा नै आएर खेतिपाति गर्न रोक लगाउँदै दुःख दिने गरेको छ । उनले सेतो पूर्जाको राजस्व नेपाल सरकारलाई बुझाएको बील समेत राखेका छन् ।
उक्त जमिनमा २०२२ साल देखि आफुले खेती गर्दै आइरहेको र यो खेतीबाली लाउने समयमा भारतीय पक्षले आएर हरेका साल दुःख दिदै आइरहेको छ ।
अत्याचारले हद् नाघ्यो, बोलिदिने कोही भएनः सीमावासी नेपाली नागरिक
यसरी नेपाली सीमानाकामा बल प्रदर्शन गर्दै आइरहेका एसएसवीेको दुःख र कष्ट भोग्दै आएका अधिकारी परिवार र स्थानीयवासीले नेपालीमाथि भारतीय सुरक्षाबलको हेपाहा प्रवृतिले सीमा नाघेपनि बोलिदिने कोही नभएको गुनासो गरेका छन् ।
मुखमुखै लाग्ने नेपालीको फोटो खिचेर राख्नुः एसएसबी अधिकारी
भारतीय सीमा सुरक्षाबलका एक उच्च अधिकारीले आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरुसंग धेरै बोल्ने अर्थात मुखमुखै लाग्नेको फोटो खिचेर राख्न आदेश समेत दिएका छन् । उनले जमिनको विषयलाई लिएर धेरै बोल्नेहरुविरुद्ध एफ.आइ.आर दर्जा गरी खेतबाट नै उठाएर लग्ने धम्की समेत दिएका छन् ।
भारतीय पक्षले नेपाली नागरिकले खेतिपाति गर्दै आएको जमिन दशगजामा पर्ने दावी गर्दै खेतिपाति गर्न रोक लगाउँदै आएका छन् । तर त्यही खेतबारीको राजश्व बुझ्ने सरकार केही पनि नबोलिदिदा नेपाली नागरिक आफ्नै जमिनमा पराई सरह पीडा भोग्दै आएका छन् ।